के सबैलाई कठपुतली प्रधानन्यायाधीश चाहिएको हो ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
के सबैलाई कठपुतली प्रधानन्यायाधीश चाहिएको हो ?
२०७८ कार्तिक २५, बिहीबार १८:२५:००
काठमाडौँ । प्रसंग प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामै गएर ठोकिन्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले उपलब्ध न्यायाधीशहरुमध्येबाट संवैधानिक विवादसँग परिचित र केही वरिष्ठ न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गरे । वकिलहरुले हल्ला गरे, यो न्यायाधीश हुन्छ, त्यो न्यायाधीश हुँदैन ।
अनि इजलासमै भएका न्यायाधीशले एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप्न थाले । प्रधानन्यायाधीशले त्यस प्रकरणलाई सहजै स्वीकार गरे । आज अरुलाई खाने बाघले भोलि मलाई पनि खानेछ भन्ने राणाले ख्यालै गरेनन् ।
त्यही घटनाबाट प्रधानन्यायाधीश राणाको अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण सुरु भएको हो । र, यसको अगुवाइ सर्वोच्च अदालतकै केही न्यायाधीश र वकिलहरुले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन ठीक थियो कि थिएन भन्नेमा इजलासमा जोकोही न्यायाधीश भए पनि सम्भवतः फैसला उही नै आउने थियो । किनभने, पानीमा कति मात्रामा हाइड्रोजन छ र कति अक्सिजन छ भनेर संसारका जुन प्रयोगशालामा परीक्षण गरिए पनि नतिजा आउने उही नै हुन्छ । न्यायाधीशका मनोगत धारणा, वैचारिक आस्था वा पक्षधरता हुन सक्छन् । तर, संविधानका धाराकै अपव्याख्या कसैले गर्न सक्दैन । एकाध न्यायाधीशले गरे पनि पाँच न्यायाधीशको इजलासमा सबैले त्यसो गर्न सक्दैनन् ।
यदि यसो हुँदो हो त दुईदुईपटक भएका विघटनका मुद्दामा गठन भएका सबै प्रकारका इजलासबाट उस्तै फैसला पनि आउने थिएन । पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सडकबाटै फैसला गर्ने आँट पनि त्यसै गर्ने थिएनन् । किनभने, विचाराधीन मुद्दामा पूर्वन्यायकर्मीले पहिला नै निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नु बडो जोखिमको इलम हो । यति कुरा सम्भवतः सबै वकिल र सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई पनि थाहा थियो ।
अदालतलाई गिँजोल्ने उद्देश्यअनुरुप यी पृष्ठभूमिमा गरिएका अभ्यास थिए । प्रतिनिधि सभा विघटन उल्टिएपछि ती गिँजोल्नेहरुको मनोबल बढ्यो । आफ्ना कारणले संसद फर्केर आयो भनेर फुइँ लगाउन पाए । यतिसम्म त ठिकै थियो । तर, अदालतभित्रैका न्यायाधीश ती अराजक दस्तासँग घाँटी जोड्न जान हुँदैनथ्यो । प्रधानन्यायाधीश राणाले गुटबन्दी गरेका हुन्थे भने आज उनको पछाडि पनि प्रशस्तै दस्ता हुन्थ्यो होला । हिजो जे अनुमान गरेर प्रधानन्यायाधीशमाथि आरोपको थुप्रो लगाइएको थियो, त्यसमा राणा एक्ला थिएनन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा गल्ती गरे भनेर आज पनि प्रश्न उठाइन्छ । ती व्यक्तिहरुप्रति अति आशक्ति, हिमचिम वा लेनदेनका आधारमा राणाले नियुक्त गरेका भए अहिले तिनै न्यायाधीश उनका विरुद्धमा किन गए ? आफूलाई नियुक्त गर्ने प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्न किन तयार भए ?
प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चूडाल, नहकुल सुवेदी लगायतलाई सर्वोच्चमा नियुक्ति दिने राणा नै हुन् । यसवापत उनले खप्नुसम्म गाली पहिला नै खपिसकेका हुन् । अनि अहिले आएर पनि त्यही विषयमा रहेर राणाले आलोचना मात्र होइन, राजीनामा वा महाभियोगसम्मको कुरा व्यहोर्नुपर्ने । राणाले त्यसमा गलत गरेका भए नियुक्ति खानेचाहिँ कसरी चोका भए ? अझ तिनै नियुक्ति खानेहरु किन राणासँग राजीनामा मागिरहेका छन् ? यो गम्भीर र जटिल पक्ष छ । त्यसैले राणाको राजीनामाका पछाडि उनका निजी कमजोरी मात्रै छैनन् । राजीनामा माग्नेहरु पनि स्वविवेकले नारा लगाइरहेका छैनन् भन्ने यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले एउटा गल्ती गरेकै हुन् कि उनले न्याय परिषदको अवहेलना गरिरहे । संस्थागत रुपमा गर्नुपर्ने कतिपय निर्णय उनले निजी तवरमा गर्न थाले । विशेष अदालत एउटा लयमा चल्दै थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्षसहित चार जना न्यायाधीशको रातारात एकल निर्णयका आधारमा गर्नुपर्ने थिएन । उचित कारण र तर्कसहित उनले न्याय परिषदबाट त्यस्ता निर्णय गराउन सक्नुपर्ने थियो । त्यस्तै अरु केही न्यायाधीशप्रति उनले विशेष आशक्ति देखाएकै हुन् । अख्तियारमा किशोर सिलवाल, कानुन आयोगमा जागेश्वर सुवेदी, न्यायिक प्रतिष्ठानमा वैद्यनाथ उपाध्याय, मानव अधिकार आयोगमा तपबहादुर मगर, समावेशी आयोगमा रामकृष्ण तिमल्सिना आदिलाई नियुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीशकै पद दाउमा लगाउनुपर्ने थिएन । जसका निम्ति उनले गरे, तिनको हैसियत अहिले देखिँदै छ । त्यो काम ठीक र उचित थियो भनेर अहिले कोही पनि बचाउमा लाग्न नसक्ने अवस्था अवश्य आएको छ ।
यसो भनिरहँदा यसवापत राणा एक्लै दण्डित हुनुपर्छ भन्ने तर्क अनुचित हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा शेरबहादुर देउवा जो भए पनि राणाले भाग मागेका हुन् र उनीहरुले दिएका हुन् भने लिने र दिने दुवै पक्ष उत्तिकै दोषी हुन् । त्यसकारण दण्डित दुवै पक्ष हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ के गरिँदै छ भने देशभरिका सारा समस्याको जड नै प्रधानन्यायाधीश राणा हुन्, उनी हटेपछि मेलम्चीको पानी पनि एकै रातमा काठमाडौँ आइपुग्छ, जनकपुरमा थन्किएको रेल पनि चल्न थाल्छ र चीनबाट बुलेट रेल लुम्बिनी पुग्छ भनेजसरी यहाँ आन्दोलन चर्काइँदै छ । जुन सरासर गलत छ ।
यहाँ केही व्यक्तिलाई अदालत मैले चलाएको छु भन्ने भ्रम जनमानसमा दिनु छ । केही व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीशको जागिर खाने मै हुँ भन्दै छाती ठोकेर हिँड्ने र अरु न्यायाधीशलाई पनि थर्काउने धोको पालेका छन् । केहीलाई अदालतको शक्ति सन्तुलन भत्काएर आफ्नो पक्षमा माहोल सिर्जना गर्नु छ । कतिपयलाई अदालतको रमिता देखाएर यो राजनीतिक व्यवस्थालाई नै गलत सावित गर्नु छ । यी सारा स्वार्थको भुमरीमा अहिले एक्ला चोलेन्द्रशमशेर राणा परेका छन् । तर, जेजस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, ती सबैले के देखाउँदै छ भने अदालत संविधान र कानुनअनुसार होइन, केही व्यक्तिको इशारामा चल्नुपर्छ र यो कठपुतली अदालत हो भन्ने प्रमाणित गर्न सबैको शक्ति एकसाथ लागेको हो